MINISITERAN’NY SERASERA: HANOMBOKA NY FANABEAZANA NY OLOM-PIRENENA VANONA
On jan 28, 2019 8 239
Nandray ny asany amin’ny maha minisitry ny serasera azy androany, Ratoa Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. Vita ny famindram-pahefana teo aminy sy ny minisitra teo aloha Riana Andriamandavy VII.
Nandritra ny lahateny izay nataony, nilaza ny ministre vaovao fa ho vaindohan-draharaha ny famerenana ny fanabeazana ho olom-pirenena vavona. Hapetraka ny fanajana sy fampiharana ny lalana mba ho tany tan-dalana ity Madagasikara ity. Anisan’ny hapetraka tsy ho ela ny sampana manokana hiandraikitra ny » Cybercriminalité ». Iarahana mijery ihany koa ny momba ny lalana hifehy ny fifandraisana, ny fizarana ny karatra maha-mpanao gazety, ny fifidianana izay ho filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety.
Anisan’ny zava-dehibe anefa ny famerenana ny fanabeazana ho olom-pirenena vanona. Hatomboka ao anatin’ny 15 andro izany.
Nanamafy ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo fa tsy maintsy apetraka ny fanajana ny fitsipipifehezana manomboka izao, mba ho isan’ny minisitera filamatra ny serasera sy ny kolontsaina.
GOVERNEMANTA : NIARA-NIVAVAKA TAMIN’NY FILOHA RAJOELINA AMIN’NY FANOMBOHANA NY ASA
HELIKOPTERA NIANJERA: AVOTRA AVOKOA NY MPANDEHA TAO ANATINY